မြစ်ဆုံ: ထူးခြားသော လက်ဖက်ရည်ပွဲ(သို.) မှတ်စု(၂)
ထူးခြားသော လက်ဖက်ရည်ပွဲ(သို.) မှတ်စု(၂)
ရုရှားမျိုးများသည်ခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းသော လူမျိုးများထည်းတွင်ပါဝင်လေ၏။ ကျွန်တော်တို.အာရှဘက်မှ အသက် ၂၂ ကျော်မာစတာတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် သူတို.နိုင်ငံကအထက်တန်းကျောင်းပြီးခါစ ၁၆ နှစ်ကျော် တက္ကသိုလ်တန်းစတက်မည်.သူများထက် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားသေးငယ်ကွာခြားလေသည်။ဥပမာမာစတာတန်းဆေးလိပ်သောက်တတ်သည်.ကျောင်းသား တစ်ဦးလမ်းဘေးမီနီစတိုးဆိုင် တစ်ခုမှာဆေးလိပ်သွားရောက်ဝယ်ယူသည်.အခါ ဆိုင်ရှင်များကမရောင်းပါ။ ဆိုင်ရှင်များမှကလေးတွေကိုဆေးလိပ်မရောင်းဘူးလို.ဆိုပါသည်။စိတ်တိုတိုနဲ.ကျွန်တော်ကလေးမဟုတ်ဘူး
သူတို.လူမျိုးတွေဘာကြောင်.ခန္ဓာကိုယ် ထွားကြိုင်းနေရခြင်းကို ယခင်ကကျွန်တော်ကောင်းစွာ မသိခဲ.ပေ။ရေခံမြေခံကွာခြားခြင်းကြောင်.လားဟုတွေးတောမိသည်။အမှန်တော.သူတို.တွေနေစဉ်စားသောက်
ထောပတ်၊ဒိန်ခဲ၊နို.၊မလိုင်၊အသားမျိုးစုံအစရှိသည်.အစားအစာတွေက နေ.စဉ်အစားအသောက်တွေထည်းမှာ တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးပါဝင်လေတော. သူတို.မျိုးဆက်တွေ မထွားဘဲနေနိုင်အုန်းမည်လော။ဒါ.ပြင် ကလေးငယ်တွေကိုဂရုတစိုက်နဲ.ကျွေးမွေးတဲ.နေရာမှာလည်းအရမ်းကိုစနစ်ကျလွန်းလှပါသည်။ဒါတွေဟာ
စွပ်လို.ခေါ်သည်. အသားပြုတ်ဟင်းချို(အားလူး၊ ခရမ်းသီး၊ နံနံပင်) ထည်.တတ်သည်။
ဘေါ.ရှ် လို.ခေါ်သည်. ရုရှားအချဉ်ဟင်းရည် အသီးအနှံများအသားများပါဝင်သည်။
ခွက်တွေထည်းမှာလက်ဖက်ခြောက်အစိမ်းနဲ.အနက် နှစ်မျိုးထည်းမှ နှစ်သက်ရာတစ်မျိုးကိုအနည်းငယ်ထည်.
အရသာ မခွဲခြားတတ်လို.လားမသိ အတူတူဘဲလို. ထင်မိပါသည်။ သကြားထည်.ပြီးတော.မသောက်ခဲ.ပါ။
စတော်ဘယ်ရီသီးနဲ. ခပ်ဆင်ဆင်ရှိသည်. မာလီးနီ အသီးများ
( ယိုထိုးထားသည်. မာလီးနီ )
လက်ဖက်ရည်ပွဲတွင် ခြံထွက် သီးနှံများဖြစ်သည်. စတော်ဘယ်ရီသီး၊ မာလီးနီ(ရုရှားအခေါ်) စသည်.အသီးတွေကိုယိုထိုးထားပြီးအချိုတည်းပါသည်။ဒါ.အပြင်ဆရာမအမေကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားသောကွတ်ကီးများ၊ ကိတ်များဖြင်.လည်း လက်ဖက်ရည်ပွဲကိုအားဖြည်.ထားသည်။အကျွေးအမွေးဧည်.ခံတာ ကောင်းလွန်းသော
ကြောင်. သူငယ်ချင်းက တစ်ပါတ်ထက်ပိုပြီး နေချင်သေးသည်။ တစ်ယောက်တည်းသော သူကို လွမ်းနေသော မောင်မောင်အဖို.အတွက်တော. သကြားမင်း အစားအစာချကျွေးပါမူ အင်တာနက်မရှိ ၊ ဖုန်းလိုင်း မမိတမိသော ထိုအပန်းဖြေရွာငယ်လေးမှာ လေးငါးရက်ခန်.အချိန်ကိုဘဲ လေးငါး နှစ်ခန်.ကြာခဲ.
သည်ဟုထင်မိသည်။နောက်ဆုံးမှာတော.တပည်.အခြေအနေကိုသိနေသောဆရာမ မှ မနေသာတော.ဘဲ
ဆရာမ အမေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားသော ကွတ်ကီးနှင်. အနံအရွက်ထည်.ထားသည်လက်ဖက်ရည်ခွက်
Posted by မောင်မောင် at 01:00
မြင်ရတာ စားချင်စရာလေးတွေ မောင်မောင်ရေ ။
ကျေးလက်ဒေသရဲ့ ရိုးရာ အစားအသောက်လေးတွေ ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ နောင်တော်.. :P
မောင်မောင်ရေ အဲနီနီသီးလေးတွေက မေမြို့မှာဆိုရင်တော့ပိုးဇာသီးလို့ခေါ်တယ်
စလုံးမှာတော့ Resparrbarries လို့ခေါ်တယ် အမပေါင်းတာမှားကောင်းမှားနေနိုင်တယ် .တော်တော်ဈေးကြီးတယ် ဒီမှာတော့. အမေလဲ အမပို့သမျှရေနွေးကြမ်းထုတ်တွေမျက်လုံးကြောင်လို့တဲကမသောက်ဖူးတော် အေးရော .း))
အစ်ကိုလွင်ပြင်နဲ. အစ်မဂျက်တို. စားချင်တယ်ဆိုရင် စားသာစားသွားပါ အားမနာနဲ. :DDD
အစ်မ မဒမ်ကိုးကိုလည်း မသိတာတွေကို ရှင်းပြပေးသွားတဲ.အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေမြို.မိုး အစ်မချစ်စံအိမ် အစ်ကိုAH တို.အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယုလေးလဲ လိုက်ချင်လိုက်တာ ... :)
အိမ် မရှိရင် နေပေ့စေ
အဲ့တိုင်ကလည်း အင်တာနက်တိုင်ဖြစ်ရမယ် :DDDD
ကိုယ့် ခံယူချက် ပြောပါ ဒယ် :PPPP
ကွန်မန်း ပျောက်သွား သလား ခင်ည :((
မောင်မောင် လာဖတ်တယ်နော်။ဟိဟိ ဒီမှာဆိုရင် ၁၈ နှစ်မှ ဆေးလိပ်ဝယ်လို့ရတယ်။ကျနော့်သူငယ်ချင်းလည်း အသက်က ၂၁နှစ် လူက ၁၀နှစ်လောက်ဆိုတော့ ဟိုတခါ မှတ်ပုံတင်ပြရတယ်။
ကွတ်ကီးလေးက စားချင်စဖွယ်လေး...မြည်းလို့ရလား ဟင် မောင်မောင် ..:P:P
ယောင်းမလေးကိုခေါ်သွားလိုက်ဆိုတာ အစ်မစံဖြစ်မယ် ဟာဟာ သိနေတယ်နော်။ ကွန်မန်းပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အစ်မတော်။ အင်တာနက်တော. မရှိမဖြစ်ပေါ.နော် ဟာဟာ လွတ်လို.မရဘူးနော်။ ကို ဇတ်ပီရေ အဲ.မှာလည်း အဲလိုဘဲလား ဗဟုသုတပေါ.နော်။
စိတ်ကြိုက်မြည်းပါ အစ်မ အိန်ဂျယ် ဟဲဟဲ ကောင်းတယ်ဆိုပါဆယ်ပါထုတ်သွား--- :DD
ပတ်စ်ပို့ ထုတ်ပြမှ ဆေးလိပ်ရောင်းတယ်ဆိုတော့ ၁၆နှစ်ထက် နုနေတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ :D
ဟုတ်တယ်။ သူတို့တွေ လူကောင် သိပ်ထွားကြတယ် ..
ချပြနိုင်ရင်သိတ်ကောင်းမယ်နော် ကလေးတွှေကိုဆေးလိပ် အရက်မရောင်းတာ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဥပဒေပဲ
အမှန် ကတော့ ရောင်းတဲ့သူတွေ က ပိုအရေးပါတာ
လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းလေးထဲ့ကို မဖိတ်မခေါ်ပဲ အရောက်လာမိ
ဟုတ်ပ အစ်မမြတ်ပြောတာ မောင်မောင်တို.ကနုကြတယ်လေ ဟဲ။ အစ်မ တတိယမြောက် ရေ ကျွန်တော်တို.အားလုံး ကောင်းတဲ.အချက်လေးတွေအတုယူသင်.တယ်နော်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း အဲသည်လို စည်းကမ်းလေးရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲဗျာ....။
အခုတော့ ဈေးဝယ်သူကလည်း ကိုယ်လိုတာရရင်ပြီးရော
ထိုထိုသော သဘောတွေနဲ့ ကျုပ်တို့ပြည်ကြီးလည်း မျေားနေပါပြီဗျာ။
28 July 2012 at 16:50
ဟာဟာ ဟုတ်ပ အစ်မရေ အလွမ်းသမားလေးဖြစ်နေတယ်